'हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था चलाउने व्यक्ति नै पाएनौँ'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
'लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बलिया भएका छन्'
फाइल तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना
लोकतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार राजनीतिले लय समातेको छैन । यसै सन्दर्भमा कवि अर्जुन पराजुलीसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
त्यो बेलाको आन्दोलन सम्झँदा त राम्रै लाग्छ । सबैलाई थाहै छ । आन्दोलनले जे सोचेको थियो त्यसअनुसार काम भएन ।
तपाईंले आन्दोलनमा होमिँदा के आश गर्नुभएको थियो ?
आश गर्ने व्यक्तिले आन्दोलनमा लाग्दैन । आन्दोलनमा आश गरेर केही पाइएला भनेर लाग्ने व्यक्ति पनि थिए होलान् । तर हामी त्यसरी लागेनौं । राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा लागेका थियौं ।
दोस्रो जनआन्दोलन भएको पनि १५/१६ वर्ष बित्यो । आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितामा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यसमा राम्रो/नराम्रो के भएजस्तो लाग्छ ?
सबै के-के कसरी प्राप्त गरे त्यो अलग्गै कुरा होला । वास्तवमा यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुथियो र गणतन्त्र ल्याउनु थियो । हामी त्यसमा लागेका थियौं । त्यसबाहेक क-कसले के ल्याए त्यो अरु नै कुरा होला । हामीले त्यो प्राप्त पनि गर्‍यौं । तर अहिले त्यो व्यवस्था चलाउने व्यक्ति हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं ।
के हुनुपर्थ्यो ? हामी सही बाटोमा छौं कि कहाँनेर बाटो बिराइयो ?
राजनीतिकर्मीहरुले जनता र देशको लागि काम गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगरेर आफ्नो लागि काम गरे । देश र जनता लुटेर आफ्ना लागि गरे ।
पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक संस्थाहरु बलिया भएका छन् कि छैनन् ?
लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बलिया भएका छन् । उनीहरुकै हालिमुहाली छ । जन्मँदै जंगबहादुर भएका छन् । संविधान नै आफ्नो खल्तीमा राखेर प्रतिगमन गरे ।
देश संघीय व्यवस्थामा गए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भयो भन्ने छ । अहिले संघीयताको सही प्रयोग भइरहेको छ त ?
त्यो राजनीति गर्नेलाई नै सोध्नुस ।
उपलब्धिको बाधक केलाई ठान्नु हुन्छ ?
मान्छेलाई । मान्छेको गलत सोचाइ । उपलब्धिको बाधक भनेको त अहिले जसले नेतृत्व गरिरहेका छन् उनीहरु नै हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ १४:२२